“အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေးကို သီတင်းကျွတ်ဂါရဝပြု သွားရောက် ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာ” – Cele Gabar
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် မင်းသမီးချောလေး ဆုပန်ထွာကတော့ လက်ရှိမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။(၂၀၁၉)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အလယ်လောက်ကတည်းက အနုပညာဖျော်ဖြေရေးတွေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို သွားရောက်နေတာဖြစ်ပြီး ပန်ပန်ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို သီဆိုဖျော်ဖြေနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုပန်ထွာကတော့ အခုလို အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်နေတုန်း အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေးဆီသွားရောက်ပြီး သီတင်းကျွတ်ဂါရပြု ကန်တော့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ဒေါ်မာမာအေးဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတလောကရဲ့ မိခင်ကြီးလို့တင်စားရလောက်တဲ့ အထိကို ဂီတလောကရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတစ်ဦးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အခုလို ဒေါ်မာမာအေးကို သွားရောက်ဂါရဝပြုဖြစ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုပန်ထွာကတော့
“Fort Wayne, Indiana. “သုခကံသာကျောင်း” ကထိန်အောင်ပွဲ သီချင်းဆိုပြီး၊ အမေ ဒေါ်မာမာအေးဆီ သတင်းကျွတ်ဂါရဝသွားကန်တော့ကြတာ ကြည်နူးစရာ။”လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဒေါ်မာမာအေးကို သွားရောက်ဂါရဝပြုခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် ကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ပန်ပန်တစ်ယောက် ဒေါ်မာမာအေးကိုသွားရောက်ဂါရဝပြုခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
“အဆိုေတာ္ ေဒၚမာမာေအးကို သီတင္းကၽြတ္ဂါရဝျပဳ သြားေရာက္ ကန္ေတာ့ခဲ့တဲ့ ဆုပန္ထြာ”
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ဆုပန္ထြာကေတာ့ လက္ရွိမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အလယ္ေလာက္ကတည္းက အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြနဲ႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ပန္ပန္ကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲေတြကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဆုပန္ထြာကေတာ့ အခုလို အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနတုန္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ အဆိုေတာ္ ေဒၚမာမာေအးဆီသြားေရာက္ၿပီး သီတင္းကၽြတ္ဂါရျပဳ ကန္ေတာ့ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။အဆိုေတာ္ေဒၚမာမာေအးဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတေလာကရဲ႕ မိခင္ႀကီးလို႕တင္စားရေလာက္တဲ့ အထိကို ဂီတေလာကရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပတစ္ဦးဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ အခုလို ေဒၚမာမာေအးကို သြားေရာက္ဂါရဝျပဳျဖစ္တာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဆုပန္ထြာကေတာ့
“Fort Wayne, Indiana. “သုခကံသာေက်ာင္း” ကထိန္ေအာင္ပြဲ သီခ်င္းဆိုျပီး၊ အေမ ေဒၚမာမာေအးဆီ သတင္းကၽြတ္ဂါရဝသြားကန္ေတာ့ၾကတာ ၾကည္ႏူးစရာ။”လို႕ သူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ေဒၚမာမာေအးကို သြားေရာက္ဂါရဝျပဳခြင့္ရခဲ့တာေၾကာင့္ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ပန္ပန္တစ္ေယာက္ ေဒၚမာမာေအးကိုသြားေရာက္ဂါရဝျပဳခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
“ပေါကားလို့ ဝေဖန်နေကြတဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိကြောင်း ပြောကြားလာတဲ့ နေထူးနိုင်”
“အလိုက်ဖက်ဆုံးသီချင်းပုံစံနဲ့ အကောင်းဆုံးသီဆိုယှဉ်ပြိုင်ပြခဲ့တဲ့ အက်စတာ”
“လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်က (၁၉၈၁)ခုနှစ်ထုတ်စာအုပ်ထဲမှာ အတိအကျပါဖူးကြောင်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ ညိုမင်းလွင်”